Facebook Home ကို Support မလုပ်သော Devices တွေမှာ အဆင်ပြေပြေထည့်မယ် | IT Sharing Network
Facebook Home ကို Support မလုပ်သော Devices တွေမှာ အဆင်ပြေပြေထည့်မယ်
ခုဖော်ပြပေးမဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ ခုတစ်လော ရေပန်းစားနေတဲ့ Facebook Home ကို Unsupport Devices တွေမှာ ထည့်သွင်းနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ Facebook Home ဆိုတာကတော့ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အပြည့် မြင်ရပြီး ဒီဇိုင်းအလန်းစားဖြင့် အသွင်အပြင်အသစ် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ နမူနာပုံတွေဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ စိတ်ချလက်ချလုပ်ပါ ကျွန်တော် GT-I9100 , S3 Mini, Huawei U8836D, Huawei U8950D တို့မှာ ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီး ဖြစ်လို့ ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ ။ မည်သည့် ကုဒ်မှ ၀င်ပြင်ပေးစရာမလိုပါဘူး app လေးတွေ Install လုပ်ပေးရုံပါပဲ။ အရင်ဆုံး မိမိဖုန်းမှာ ထည့်ထားသော facebook နဲ့ ပက်သက်တဲ့ app တွေ ကို clear data ရော uninstall ရောပြုလုပ်ထားပါ။ အဓိက အနေနဲ့ကတော့ facebook ရယ် facebook messenger တွေကအဓိကပါခင်ဗျာ play store ကိုလည်း Foce close နဲ့ Clear data ပြုလုပ်ထားပါ။ ပြီးရင်တော့ နောက်တစ်ဆင့် ဆက်ကြမယ်နော်...
အရင်ဆုံးလိုအပ်ဖိုင်လေး သုံးဖိုင်ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးဗားရှင်းတွေ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Play Store က ဒေါင်းရင် အဆင်မပြေ ဖြစ်မှာ မို့ တင်ပေးထားပါတယ်။
အားလုံးဒေါင်းပြီးသွားရင်တော့ အင်တာနက်ကိုဖွင့်ပါ။ ပြီးရင် Facebook နဲ့ Facebook Messenger ကို Install
လုပ်ပြီး ပြီး Login ၀င်ပေးပါ။ နှစ်ခုလုံး ကို Login ၀င်ရမှာပါ။ ပြီးသွားရင်တော့ Facebook Home ကို Install လုပ်ပါ။ Install လုပ်ပြီးသွားရင် ဖွင့်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ ရိုးရိုး facebook ကိုပဲဖွင့်လိုက်ပါ Facebook Home Confirm ဖြစ်သွားပါပြီ။ Facebook ရဲ့ Setting ထဲမှာ ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ။ Enable Facebook Home လေး တိုးလာမှာပါ Facebook home ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အမှတ်လေးဖြစ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲခင်ဗျာ။ ခုချိန်ကစပြီး Facebook Home ကိုစတင်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။
Kaspersky Daily Activation Keys 28 April 2013 + A...
Teracopy pro 2.7 (Copy လုပ်တဲ့ နေရာမှာ မြန်ဆန်တဲ့)
Huawei G510-0010 Root လုပ်ကြမယ်
CCleaner 4.01.4093 Professional + Business Edition
Ace Translator 10.5.3.861 (languages တွေကို အပြန်အ...
One of the God Phone လို့အမည်ပေးထားတဲ့ T8828 ရဲ့ အ...
Internet Download Manager 6.15 Build9Final + Ret...
All mobile Master code 100% tested
System Repair Disc ရေးသားနည်း
Advanced SystemCare Pro 6.2.0.254 Final Datecode 2...
BlueStacks 0.7.11.885 Beta | 8.65 MB
Secure Folder v7.4 | 1.18 MB
Talking Tom Cat2v2.2 for Android
Zawgyi Installer4Rooted Android (exe file)
Find MAC Address 3.9.0 Build 102
Maxthon Cloud Browser 4.0.5.4000 Final + Portable
Wise Registry Cleaner 7.68 Build 504 + Portable
Chin Tablet နဲ့ Phone တော်တော်များများကို Root လုပ...
Facebook Home ထည့်ပြီး Jelly 4.1.2 မှာ မြန်မာမမြင်...
Facebook Home ကို Support မလုပ်သော Devices တွေမှာ ...
Logon Screen Background in Windows7က Logo Image ...
VLC media player 2.0.6 Final + Portable (x86/x64)
Root_with_restore_by_bin4ry_v26 (Lastet Version)
Gmail အတွက် အစွမ်းထက် နည်းလမ်း (၈၀)
Super Video for Android (lastet Version)
Handwriting Calucator for Android
SpyShelter (Hacking ရန်မှ ကာကွယ်ကြမယ် )
Peachtree Accounting (ကွန်ပျူတာ စာရင်းကိုင် မြန်မ...
Movie Maker ကို Window7ပေါ်မှာထည့်သွင်းခြင်း
ပီစီအဆင့်မြှင့်တပ်ဆင်ခြင်း - မောင်ကွန်ပျူတာ
မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓါန် + Whizzo (Eng to Mya Dicti...
Colors For Facebook ( for Android )
Remo Recover Windows4Pro + လိုင်စင်ထည့်ပုံ
Password Facebook Recovery
ISA Server 2006 Configuring
Battery Doctor (Myanmar Mode)
Kaspersky Daily Activation Keys 6.4.2013 + All Ant...
Microsoft Office 2013 X86/X64 + Activator ( Activa...
Window7မှာ အခြားသော partation တွေကို Share ပေးမယ်
Huawei Y310 ကို Root ဖောက်လို့ သေသွားတဲ့ Touch er...
SoftOrbits Sketch Drawer 1.2 Multilingual (ခဲခြစ်ပ...
Odin U Disk Encrypt Creator 9.8.2
Huawei U8825D & U8950D unlock မလုပ်ပဲ root လုပ်မယ်
Huawei U8651T ကို Root လုပ်နည်း
Microsoft Fix it နဲ့ မိမိ၇ဲ့ Window လေးကို ပြင်မယ်